Myanmar OA6: ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်
နှစ်ဆန်း ၂ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မှာရောက်နေတဲ့ Blogger တွေ ဆုံဖြစ်ကြတယ်။ လက်လှမ်းမှီသလောက်ပေါ့။ နိုင်ငံခြားကရောက်လာတဲ့ သူတွေရော၊ ဒီကလူတွေပါလာကြပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Blog Post တွေကို စာအုပ်ထုတ်ဖို့ပါ။ အကျိုးအမြတ်ရလာခဲ့ရင် လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ လှူဒါန်းကြမယ်ပေါ့လေ။ ကျွန်တော့်ကို ကိုဘလာဂေါက်နဲ့ မထိုက်တို့ စာပို့ပြီးခေါ်လို့ ရောက်သွားတာပါ။ ပြောရရင် သိတဲ့လူ တစ်ယောက်မှမပါပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားလို့သာ သွားတွေ့တာ။ တကယ့်ကို Idea ကောင်းတဲ့ Blogger စစ်စစ်တွေကြားမှာ Mr.Pooh မျက်စိသူငယ် နားသူငယ်နဲ့ ထိုင်နေတာပေါ့လေ။ အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲရဲ့ သဘောတူညီချက်အရ တက်ရောက်လာတဲ့အထဲက Blog တွေကို ဖတ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေက တစ်ယောက်ကို Blog ၄ - ၅ ခုစီလောက်ဖတ်ပေးရမယ် - ပြီးရင်ကောင်းတဲ့ Post ရွေးပေးရမှာပါ။ အဲဒီတော့ အခု ကျွန်တော့် Post ကို ဖတ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေမှာ ကိုယ်ပိုင် Blog လည်းရှိမယ်၊ ပြီးတော့ မိတ်ဆွေရဲ့ Blog ဟာ ဒီစာရင်း ထဲမှာ မပါသေးရင် ကျွန်တော့်ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ။ မိတ်ဆွေရဲ့ Master Piece လေးတွေ စာအုပ်ထုတ်ရင် မပါသွားမှာစိုးလို့ပါ။ အခုဆိုရင် စဖတ်နေကြပါပြီ။ ဒါကြောင့် မြန်မြန်လေးအကြောင်းကြားပေးကြပါလို့။ အသေးစိတ်သိချင်ရင် ကိုစိုးဇေယျ ဆီမှာသွားကြည့်ပေးပါ။
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 4:03 PM
Mr Pooh... I saw your comment on my blog. I am alright with my posts being used in the blogbook. In fact, there are2posts of mine on mmblog site already. Pls just let me know which posts will be chosen.
Dear Sis, I will inform you which posts are selected. Thanks for your concern.